China Bags orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Kitapom-barotra ambongadiny azo aforitra, kitapo tsy misy tenona, kitapo lamba, kitapo, tontolo iainana, fahalemena ary maharitra. Item fampiroboroboana mety indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana ho an'ny dokam-barotra sy ny orinasa.
Amin'izao fotoana izao dia tokony hisolo tena ny fiainana feno tontolo iainana isika, tokony hiezaka araka izay azo atao ny mampiasa kitapo fanary rehefa miantsena ianao, avy eo ny kitapo azo ampiasaina dia soloina kitapo fanary. Ny Pretty Shiny Gift Inc. dia manolotra karazana kitapo fiarovana fiarovana tontolo iainana vaovao maro, fividianana akora mora ary fanamboarana mora. Mampiasa imbetsaka mba hitsitsiana loharano.
Ny kitapo azo ampiasaina dia azo ampiasaina matetika amin'ny fiainantsika andavan'andro, ireo kitapo ireo dia nanjary fomba iray tena ilaina amin'ny fanaovana doka sy fampiroboroboana, ary koa fomba iray ara-toekarena amin'ny fanaovana doka na fampiroboroboana ny marikao, fikambanana. Azonao atao ny manamboatra ny sary famantarana na hafatra eo aminy. Ny kitapo koa dia azo amidy ho fanomezana. Raisinay ny volavolanao lamaody.
Eo moa! Mifandraisa aminay, alao ny kitapo namboarinao.
Kitapo fitaovana azo ampiasaina:
Kitapo tsy misy lalivay (60g / 75g / 90g / 100g / 120g / 150g misy)
Kitapo lamba (6oz / 8oz / 10oz misy)
Kitapo harona landihazo
Kitapo lamba Oxford (210D / 420D misy)
Fomba fizahana logo: Pirinty vita amin'ny Silkscreen / pirinty offset / sary famindrana hafanana / amboradara
Fanaovana: zipper / tady landihazo / vy / plastika
Tombon'ny Nkitapo onwoven:
• Azo sasana izy, mateza ary afaka miaina, sady tsy mahazaka aretin-tsaina, malefaka ary maivana koa.
• Fitaovana marika manaitra hanohanana azy satria afaka manonta ny sary famantarana azy.
• Malalaka ny tontolo iainana ny kitapo azo antoka sy tsy misy poizina.
• Arovy ny tontolo iainana: hampihena ny fahalotoan'ny tany ateraky ny harona plastika ny fampiasana azy. Azo averina ampiasaina sy azo ampiasaina indray izy ireo. Ny fanalefahana ny famaohana ny kitapo tsy misy tenona dia lo ao anatin'ny 6 volana, tsy toy ny harona plastika izay maharitra taona maro vao simba tanteraka.
• Mety amin'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra.
Tombon'ny lamba kitapo:
• Ny akora vita amin'ny kitapo lamba vita amin'ny lamba canvas dia vita amin'ny akora voajanahary, izay sariaka amin'ny tontolo iainana sy voajanahary.
• Mahery sy mateza, mora diovina koa.
Tombony Cotton harato kitapo:
• Fomba lamaody
• Fahaiza-mivelatra sy lehibe
• Kitapo maivana ary mora fonosana
Tombony oxford lamba kitapo
• Mora manasa sy maina haingana
Teo aloha: USB USB malefaka
Manaraka: Kitapom-bolam-by vy fanontana UV
Kitapo fiantsenana tsy tenona
Kitapo tsy misy lalivay
Kitapo miantsena tsy misy lalivay